Umhambisi wamanzi → Inkonzo Yezempilo • Isibhedlela • Ihhovisi • I-Clinic Warsaw
Ngabe udinga isitsha sokuhambisa amanzi esibhedlela, ihhovisi likadokotela, umtholampilo wezempilo? Inkampani yaseWater Point iyanikezela abahambisa amanzi ngaphandle kwamabhodlela, abaphuzayo, Umthombo wabaholi bomhlaba embonini, esingaba ngumhambisi kuphela ePoland.
Izibhedlela, imitholampilo yezokwelapha kanye nama-sanatorium yizindawo lapho abantu abadinga ukunakekelwa okungajwayelekile nokunakekelwa ukuhlala kwabo kwezempilo. Kwesinye isikhathi isikhathi sokulinda senqubo sude. Kukhona futhi izimo lapho iziguli kufanele zihlale esikhungweni sezempilo esinikezwe izinsuku, amasonto noma izinyanga.
Kwenzeka kaningi ukuthi ukudla neziphuzo ezengeziwe zeziguli noma kubahlali kuhlinzekwa ngumndeni osondele noma abangane. Noma kunjalo, lokhu akwanele. Udinga ukufinyelela njalo kokudla okusha, okumnandi nokunempilo amanzi, etholakala mahhala kunoma ngubani ovakashela isibhedlela noma isikhungo sezempilo, kubo bonke abavakashi nabasebenzi.
Siphakamisa ikakhulukazi laba bantu iziphuzo zamanzi okuphuza ihloselwe izibhedlela nezindawo zokunakekelwa kwempilo lapho amanzi kufanele ahlangabezane namazinga aqine kakhulu. Izitsha zamanzi ezibhedlela ziyikhambi elithembekile elinganikeza iziguli, izivakashi nabasebenzi ngamanzi aphezulu okuphuza enambitheka.
Ngenxa yezixazululo zobuchwepheshe, abahambisa amanzi okuphuza bangaqinisekisa inhlanzeko nokuphepha kokusebenzisa.
Amanzi amahhala, anempilo azokwenyusa izinga lezinsizakalo zezokwelapha, futhi izindleko zokusebenzisa idivaysi enjalo lincane impela.
Abahambisa amanzi okuphuza, iziphethu nemithombo yamanzi kuhlinzeka ngamanzi ahlanzekile futhi ahlanzekile ahlangabezana nezimfuneko ezinzima zokuhlanzeka kanye nezifo zezifo.
Ngaphezu kwalokho, la madivaysi amahle futhi anamuhla, futhi ukusetshenziswa kwawo kulula, noma ezinganeni nasebekhulile.
Izindawo zokuphuza amanzi zingafakwa emaphaseji, kumagumbi okulinda nasezindaweni ezivamile. Zenzelwe ukuqinisekisa ukududuza kokusetshenziswa futhi ngasikhathi sinye kungabi yingozi yezinto eziphilayo. Zingasetshenziswa futhi emahhovisi nasemahhovisi.
Amanzi okuphuza ahlanzekile futhi amnandi ayisibambiso sempilo yethu futhi ikakhulukazi abantu abagulayo noma ababuthakathaka, kanye nabasebenzi nabantu abathintekayo ekunakekelweni kwabantu abagulayo kufanele babe nokufinyelela okulula kuyo.
Ama-dispensers amanzi okuphuza enziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu, eziqinisekisa isimo esihle kakhulu sobuchwepheshe kanye nokubukeka kwedivayisi isikhathi eside. Idizayini yanamuhla ingena kunoma iyiphi indawo yomphakathi futhi nasezibhedlela, ezikhungweni zezempilo nasezibhedlela ngeke kube yisixazululo nje kuphela, kepha futhi nomhlobiso wendawo enikeziwe.
Ama-dispenser anohlelo oluthuthukisiwe oluvikela ekuvikelekeni kwamanzi okungalawulwa kanye nezindlela ezifanele zokuphepha.
Izitsha zokuphuza zamanzi ezihlanganiswe ezibhedlela zonga isikhathi nendawo futhi zinomthelela omuhle emvelweni.
Le mishini yesimanjemanje inikezela ngamanzi acwebile ekhristali ezungeze iwashi kubo bonke abantu abahlala esibhedlela, umtholampilo noma i-sanatorium.
Kuphinde kube yisixazululo se-pro-ecological and economical, ngoba akudingeki ukhathazeke ngokuhambisa amanani amaningi amabhodlela amanzi, ukugcinwa kwawo uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uchithe kabusha imfucuza.
5 / 5 ( 14 amavoti )
umshini wokuthengisa amanziamanzi amahhala ezibhedlelaisitsha samanziisitsha samanziisitsha samanziisitsha sokuhambisa amanzi se-carbonatedisitsha samanzi esibhedlelaintengo yokuqasha amanziisipompo sokuhambisa amanziabahambisa amanziukuphuza umthombo wamanzi esibhedlelai-carbonation yamanziisiqandisi esisebenzisa amanziumshini wokudonsa amanziabaphuzayo esibhedlelaithuluzi lamanzi we-gassingidivaysi yamanzi ekhabhoniamanzi ekunakekelweni kwezempiloamanzi ngempiloamanzi ezibhedlelaamanzi akhazimulayo avela empompiniamanzi ehhovisi likadokotelaamanzi emtholampilo wezempiloamanzi entwasahlobo